Wednesday February 21, 2018 - 20:48:21 in Wararka by Super Admin
Ragga Firfircoon ee soo tabiya kacdoonka Suuriya ayaa warbaahinta u sheegay in ugu yaraan 280 qof ay ku dhinteen duqeymaha lagu baabi'inayo muslimiinta ee Ghuudada Bari ka socda.
Goob Joogayaal ayaa sheegay in dhimasho hor leh ay ka dhalatay duqeymo cusub oo maanta ka dhacay magaalada, Meydadka ayaa wali daadsan waddooyinka.
Sedax kamid ah isbitaallada magaalada Alghuudah ayaa shaqada gabay kadib markii ay burburiyeen diyaaradaha dagaalka dowladda Ruushka.
Baraha bulshada ayaa lagu faafiyay sawirro muujinayay xasuuqa ka socda wadanka Suuriya, sawirrada lafaafiyay waxaa kamid ahaa carruur dhiiggu ka da'ayo oo burburka dhismayaasha hoostooda lagasoo saarayo iyo Meydad waran magaalada.
Tani waxaa xasuuq aan loo meel dayin oo ay geysanayso dowladda Ruushka waxaana sheedda ka daawanaya dowladaha dabadhilifyada Carabta ee dariska la ah Suuriya iyo kuwa ka fog.
Ciidamada Nidaamka Bishaar Al-asad iyo maleeshiyaadka shiicada ah oo dhanka cirka ay ka taageerayso Russia ayaa doonaya in ay qabsadaan dhammaan deegaannada ku dhow magaalada caasimadda ah, waxayna iska dhega tirayaan heshiisyadii ay mucaaradka lagaleen ee dhigayay in colaadda lajoojiyo.
Sidaas oo ay tahay ayay qaar kamid ah xoogaga Kacdoonka Suuriya dhaxdooda ku dagaallamayaan gobolka Xalab, intii ay ugurman lahaayeen ayay daadinayaan dhiiggooda iyo midka shacabka tanina waxay kamid tahay musiibooyinka joogtada ah ee maalin walba lagasoo warinayo dhulka Shaam.